Cabdiweli Muudey oo Sheegay in uu Ansax yahay Mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari | SAHAN ONLINE
Cabdiweli Muudey oo Sheegay in uu Ansax yahay Mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari
Cabdiweli Ibrahim Muudey
MUQDISHO – Guddoomiye Kuxigeenka 1aad ee golaha Shacabka Cabdiweli Ibraahim Muusey ayaa sheegay in mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari uu yahay mid sharci ah.Waxa uu ka horyimid go’aankii ay guddiga joogtada ah ee golaha ku laaleen mooshinka shalay lasoo gudbiyay.
Cabdiweli Ibraahim Muuse oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in isagu markii mooshinka uu qabtay uu sidaas sharci ku noqday ,wuxuuna ku dooday in Xildhibaano gaaraya 107 ay soo saxiixeen mooshinkaas kalsoonida loogala noqonayo Guddoomiye Jawaari.
Waxa uu ku dooday in isagu awooda Guddoonka la wareegay,waxa uuna xusay in isaga oo keliya isugu yeeri karo Guddiga Joogtada ah ee shalay laalay Mooshinka,isagoona sharci darro ku tilmaamay kulankii ay guddigaas ku yeesheen Muqdisho.
Sidoo kalena waxa uu sheegay in isagu uu yahay hogaanka laga sugayo in uu maareeyo mooshinka ka dhanka ah Guddoomiye Jawaari.
Guddiga Joogtada ah ee Baarlamaanka ayaa sheegay shalay in uu fashilmay mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari kaddib markii tiradii loogu talagalay ay ku buuxsami weyday isla markaana shuruudihii looga baahnaa ku gudbi waayey.
Guddoomiye Jawaari ayaa lagu soo eedeeyay mudadii uu xilka hayay ku kacay falal liddi ku ah Dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka ,wuxuuna guddoomiye ku xigeenka 1aad loo gudbiyay mooshinka kaasoo si rasmi ah u qabtay.
Ugu dambeyn ,Guddoomiye Maxamed Cismaan Jawaari ayaa sheegay in hab sharci ah xildhibaanada kusoo gudbiyeen mooshinkooda isla markaana hab sharci ah lagu laalay kadib markii ay shuruudihii buuxin waayeen, taasi oo uu ku tilmaamay inay ka tarjumeyso nidaamka dimuquraadiyada, wuxuuna sheegaya in maalinta sabtida ah Golaha sii wadan doono hawlihii horyaalay.